လက်ကား KD-LC-8M Professional Live Casting Video Live Cast Station ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
1. ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ခြင်း- ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းသည့်နေရာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်အချက်ပြမှု (SDI၊ HDMI၊ DVI၊ VGA) + NDI + Stream+ DDR ဖိုင်၊ ရောစပ်ပြောင်းခြင်း၊
Alibaba တွင် KD-LC-8M ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
အလေးချိန် 10 ကီလိုဂရမ်
ဗီဒီယိုအထွက် PGM အထွက် DVI×1၊HDMI×1၊SDI×1၊NDI×1၊PVW အထွက် DVI×1၊HDMI×1၊SDI×1၊စနစ်များသည် HDMI×1 ကိုပြသသည်။
အသံထွက် စတီရီယို (L၊R) OUT RCA×1၊Balanced XLR OUT×2၊Monitor3.5×1၊ပြန်ဖွင့်သည့် မော်နီတာ 3.5×1၊ ဒါရိုက်တာက MIC3.5×2 ဟုခေါ်သည်။
အသံချဲ့စက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှောကိရိယာ×၅၊ အင်နာလော့ ရောနှော×၅၊ အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲနှောင့်နှေးမှု ကိရိယာ×၁
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဗီဒီယို MPEG2-HL၊ လွှင့်မီဒီယာ MP4
ထုတ်လွှင့်မှုနှောင့်နှေးခြင်း။ အသံနှင့် ဗီဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ်၊(ပုံမှန်မဟုတ်သော)
ဖွဲ့စည်းမှု Intel i9 9900TCPU၊ RAM 16G၊ 1TB SSD
1. ဟာ့ဒ်ဝဲ- i9 9900T CPU၊ 16 GB မမ်မိုရီထက်ပိုသော၊ ဂစ်ဂါဘစ် NIC၊ 1TB SSD ဒစ်ကျော်၊ တပ်ဆင်ထားသည့် HD မျက်နှာပြင် လေးခု၊ ပင်မစနစ်မျက်နှာပြင် 17.3 လက်မနှင့် ထို့ထက်ပိုသော တစ်ခု၊ 6.5 ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းသည့် အထွက်စောင့်ကြည့်ရေးစခရင်တစ်ခု လက်မ သို့မဟုတ် ထို့ထက်မက၊ 4.3 လက်မ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော signal input စောင့်ကြည့်ရေးစခရင်နှစ်ခုနှင့် မျက်နှာပြင်လေးခုသည် 1920×1080LED HD မျက်နှာပြင်များဖြစ်သည်။၎င်းသည် built-in 8-channel HD ရယူမှုနှင့် coding စနစ်ပါရှိသော mg alloy ကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အသံသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော all-in-one စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ထည့်သွင်းမှု- VGA×2၊ DVI×8၊ HDMI×8၊ SDI×8၊ NDI×6၊ Stream×8၊ အထွက်- DVI၊ HDMI၊ SDI၊ NDI၊ NDI၊ ထုတ်လွှင့်မှု အထွက်- SDI×2၊ အထွက်- SDI×8၊ HDMI ပင်မစခရင်အထွက်၊ အစိတ်အပိုင်း \_VGA\_DVI\_HDMI ပြင်ပစာတန်းထိုးစက် အဝင်အင်တာဖေ့စ်နှင့် သော့၊ အထွက်တွင် ဟာ့ဒ်ဝဲ PGM အထွက်နှင့် PVW အထွက်တို့ ပါဝင်သည်။
3. ချန်နယ်ခြောက်ခုပါ၀င်သော ဟာ့ဒ်ဝဲ hd ရောစပ်စတန့်ပလပ်ဖောင်း၊ မျက်နှာပြင်အပြည့် ရောစပ်ထည့်သွင်းထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲ ရောစပ်စတန့်ခလုတ်၊ တပ်ဆင်ထားသော ရုပ်ပုံ-ပုံ-ပုံ-ပုံအနေအထား မည်သည့်အနေအထားကိုမဆို rocker potentiometer၊ တပ်ဆင်ထားသည့် ထုတ်လွှင့်မှု damping ခလုတ် T တွန်းတံ၊ သုညစက္ကန့်အပြည့်ဘောင်ကို ရရှိရန် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲရောစပ်ထားသော 1920×1080၊ ကုဒ်ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု 1920×1080၊ Full HD 4:4:4 ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ကူးပြောင်းခြင်းတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ထည့်သွင်းအချက်ပြခြင်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်း DDR (ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ PPT စသည်ဖြင့်) ဖိုင်ကိုလည်း သိရှိနိုင်သည် ကူးပြောင်းခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ rotary ကုဒ်ဒါမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း DDR ခေတ္တရပ်ခြင်း၊ ရှေ့နှင့်နောက်သို့ ရွေးချယ်ထားသော ပလေယာပွိုင့်နှင့် ပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းခြင်း အထူးပြုလုပ်ချက် အမျိုးအစား 100၊
4. ဟာ့ဒ်ဝဲထည့်သွင်းခြင်းအချက်ပြခြင်းနှင့် NDI၊ ဒေသတွင်းဖိုင်များ (ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ PPT) နှင့် ကွန်ရက်စီးဆင်းမှု (မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ uav Stream နှင့် အခြား RTMP တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု) အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခလုတ်၊ တပ်ဆင်ထားသည့် NDI×6၊ Stream×6၊ တွန်းအားပေးမှု တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပြီး Stream မုဒ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ။
5. Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် + အန်နာရောနှော ပေါင်းစပ်ထားသော အသံ၊ မြှပ်နှံထားသည့် အသံနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် အန်နာလော့အသံ ရောနှောခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး SDI×5၊ HDMI×5 ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ မြှုပ်သွင်းထားသော/မထည့်ဘဲ ထည့်သွင်းမှုရွေးချယ်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်×5၊ နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ ×5 ၊ analog စတီရီယို ×5၊ MAC XLR×5 နှင့် အခြားသော ပြင်ပထည့်သွင်းမှု အသံရောစပ်ခြင်း၊ HDMI၊ SDI အထွက်အတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော အသံကို တစ်ချိန်တည်းတွင် စတီရီယိုအထွက်အဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်၊ တပ်ဆင်ထားသော 48V ဖန်တမ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ XLR×5 ထည့်သွင်းမှု၊ စတီရီယို ×၅ ထည့်သွင်းမှု၊ စတီရီယို ×၁ အထွက်၊ ထုတ်လွှင့်မှု စောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1၊ ထုတ်လွှင့်မှု စောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1၊ ထုတ်လွှင့်မှု စောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1၊ လမ်းညွှန် စကားပြော နားကြပ် 3.5×1၊
6. အသံ၊ အသံနှင့် ဗီဒီယိုများ၏ အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန် ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးသည့် ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသော အသံ၊
7. Built-in ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲအသံဖမ်းယူနစ်၊ အသံသွင်းဖော်မတ်သည် FHD ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် အဆက်မပြတ်ဘောင် ကိန်းသေကုဒ် MP4 ဖိုင်ဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက် အပိုင်းပိုင်းအသံသွင်းသည့်အချိန်အရ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဘေးကင်းမှုကို သေချာစေပါ။
8. built-in ဟာ့ဒ်ဝဲ rocker potentiometer၊ ထိန်းချုပ်မှု4အစုံ ကင်မရာတွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လှုပ်ခြင်း၊ စောင်းခြင်း၊
9. 4-channel multicast ခေါ်ဆိုမှုစနစ်နှင့် 4-channel multicast prompt စနစ်အတွက် Built-in ဟာ့ဒ်ဝဲ TALLY;
10. Built-in hardware stepping encoder စာတန်းထိုးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ စာတန်းထိုးရွေးချယ်မှုနှင့် စာတန်းထိုးခလုတ်ကို သိရှိနားလည်ပါ။
11. Built-in ဟာ့ဒ်ဝဲ သော့တစ်ခုတည်းသော့ခလုတ်စနစ်၊ virtual keying အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချိန်ညှိရန် ဟာ့ဒ်ဝဲ rotary ကုဒ်ဒါ၊ virtual ပေါင်းစပ်ရုပ်ပုံကို t-type damping switch push rod မှတဆင့် အခြားအချက်ပြမှုများနှင့် ဖိုင်များနှင့်ပြောင်းရန် အချက်ပြအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
12. Built-in အသံနှင့် ဗီဒီယို ဒစ်ဂျစ်တယ် hd ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေး ထုတ်လွှင့်မှု စနစ်၊ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒါရိုက်တာသည် အရေးပေါ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်၊
13. ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ်၏ နှောင့်နှေးမှု နှင့် အရေးပေါ် ကူးပြောင်းခြင်း နှင့် လမ်းပြဘူတာရုံ၏ အမျိုးမျိုးသော အချက်ပြမှုများကြားတွင် ကူးပြောင်းခြင်းသည် ဖရိမ်ထပ်တူပြုခြင်း နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဘောင်ပြည့် hard cutting ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ဗီဒီယိုတွင် compression hardware delay နှင့် 4GB သီးခြား hardware cache မရှိပါ။
14. ဆော့ဖ်ဝဲ- ပါ၀င်သော ဗီဒီယိုကုဒ်စနစ်၊ MPEG2၊ AVI-DV25၊ AVI တို့ကို ချုံ့ခြင်းမပြုဘဲ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်၊ AVI hd၊ မူရင်း 4-bit တပြိုင်နက်တည်း အသံသွင်းခြင်းနှင့် multi-bit တည်းဖြတ်စနစ်၊ built-in streaming မီဒီယာ WMV9, H. 264 ကုဒ်နံပါတ်စနစ်၊ built-in dual-bit stream အသံဖမ်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ်၊ WMV၊ MP4 နှင့် 50Mbps/S တွင် ထုတ်လွှင့်သည့်အဆင့် HD MPEg2-HL ၏ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်၊ built-in WMS နှင့် FMS ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်နှင့် FMS အသံနှင့် ရုပ်ပုံတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထပ်တူပြုခြင်းညှိနှိုင်းမှု;
15. Built-in CG-Alaph စာတန်းထိုးနှင့် အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုစနစ်၊ Alaph တက်ကြွသောစာတန်းထိုး၊ Angle အမှတ်အသားနှင့် ပလက်ဖောင်းအမှတ်အသားစသည်ဖြင့် 3d အရာဝတ္ထုများနှင့် အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တက်ကြွသောပစ္စည်း၊ DVE တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၊ ဗီဒီယိုပစ္စည်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ တိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း၏ ဘက်စုံအမြင်အာရုံ ထုပ်ပိုးမှုအောင်မြင်ရန်၊
16. Built-in ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် nonlinear တည်းဖြတ်စနစ်;
17. အင်တာဖေ့စ်- VIDEO IN×8 (BNC);VGA IN×2;DVI IN×8;HDMI IN×8;ဗီဒီယို OUT×8 လက်စွပ် OUT (BNC);စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) IN×5;ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိုက်ခရိုဖုန်း (48V) XLR IN×5;စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) OUT×1;ဟန်ချက်ညီသော အထွက်အား XLR OUT×2;DVI OUT×2;HDMI OUT×2;SDI IN×8;SDI OUT (လက်စွပ် OUT) × 8;SDI OUT×2;ပင်မအထွက်စောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1;စောင့်ကြည့်မှု 3.5×1 ကစားပါ။MIC 3.5×2;ကွန်ရက် RJ45(1000 MB) ×1;485 ထိန်းချုပ်မှု RJ45×1;USB2.0×2;USd 3.0×2;PGM အထွက် HDMI×1၊ SDI×1၊ DVI×1၊PVW အထွက် HDMI×1၊ SDI×1၊ DVI×1၊ပင်မအထွက် HDMI×1;TALLY MINI XLR 6-core OUT×8;
18. WIN10 64-ဘစ် လည်ပတ်မှုစနစ်၊
ယခင်- KD-C1000UH အရောင်းရဆုံး 4k အသံလွှင့်ကင်မရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစပ်ထားသော 12x Optical Zoom Ptz ကင်မရာ
နောက်တစ်ခု: KD-LC-8N စက်ရုံစျေးနှုန်း အိတ်ဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ကာစ်တ်စက်ပစ္စည်း